'Iyo Sandman' Audio Series Inouya Ino Zhizha kubva Kunonzwika uye DC
musha Horror Varaidzo Nhau 'Iyo Sandman' Audio Series Inouya ino Zhizha kubva Kunonzwika uye DC
yakanyorwa na Waylon Jordan March 4, 2020
Neil Gaiman's graphic novel series, The Sandman, anga achinyanya kufarira kubva payakatanga kuburitswa kumashure muna 1989, uye mwaka uno weChirimo, mafeni vachange vaine nzira nyowani yekunakidzwa nevanhu ava nerekodhi nyowani-mutambo kubva kuAudible uye DC Comics yakataurwa naGaiman iye.
Inotungamirwa naDirk Maggs, iko kuchinjika kucharatidza zvine hungwaru dhizaini dhizaini uye yakapfuma, inonyudza odhiyo maererano neshoko repepanhau ratichangobva kugamuchira. Maggs akamboshanda naGaiman akambo gadzira odhiyo modhiyo Ivo Anansi Vakomana, Mashura Akanaka, Hakuna kwaanosvika, uye Kudzora.
Kana wezvemashiripiti achiedza kutora chimiro cheRufu muchibvumirano chehupenyu husingaperi, iye nekukanganisa anoteya munun'una weRufu Morpheus, Mambo weDoto. Mushure memakore makumi manomwe ejeri uye pakupedzisira kupukunyuka, Morpheus anoenderera mberi nechido chekutora zvinhu zvake zvakarasika zvemasimba uye kuvaka patsva nzvimbo yake. The Sandman anotevera Morpheus, uye vanhu nenzvimbo zvaakakanganiswa, apo iye achiedza kugadzirisa zvisikwa zvepasi rose uye zvevanhu zvaakaita panguva yehupenyu hwake husingaperi.
Gaiman ave achibatanidzwa mune nhanho dzese dzeichi chiitiko, achiunza The Sandman kuhupenyu mune odhiyo neMaggs.
"Anenge makore makumi matatu apfuura, Dirk Maggs akaenda kuDC nezve kugadzirisa The Sandman mune fomu yekuteerera. Izvo hazvina kuitika (kunyangwe zvaive zvekuti isu naDirk takatanga kuyambuka nzira) uye ndinofara kuti hazvina kuitika, nekuti isu tiri mune yeGolden Age yemutambo wemadhirama izvozvi, uye ini naDirk tiri nani pane izvo tiri kuita, ”akadaro Gaiman muchitaurwa. "Uku kwakapfuma odhiyo kuchinjika kwe The Sandman Graphic Novels, yakashongedzwa zvakagadzirwa naDirk Maggs, iine nyeredzi-nyeredzi. Ndakafarira kuvapo kuti nditaure nezvekukanda, ipapo kuverenga magwaro uye kupa dzimwe nguva kuraira, uye imomo muma studio, kuona mashiripiti achigadzirwa uye kurekodha rondedzero. Handigoni kumirira kusvikira nyika yanzwa zvatakaita. ”
"Iyi odhiyo iteration ye The Sandman yakakura mukuyera uye chishuwo uye inoenderana chete nezvakanyorwa nezvakanyorwa naNeil zvemufananidzo wake weDC. Kugadzira kwedu kunodzika mukati mekufunga kwaNeil, sekunge ari kunyora ngano idzi padivi pedu, achisimudza ruzivo uye nenyaya dzenyaya vashoma vanga vachiziva kusvika zvino, "Maggs akawedzera. "Mutinhimira wakasarudzika unozadzisa bhuku remakomiki vanyori vanoona zvekufungidzira uye nehunyanzvi hwekugadzira hwaNeil, nepo vatambi vedu vanoshamisa uye mimhanzi yaJim Hannigan ichiwedzera nyowani yepamoyo. Iyi purojekiti yemakumi matatu emakore incubation nguva yanga ichikosha paminiti yega yekumirira. Ndiwo musimboti waNeil Gaiman's Sandman.
The Sandman chave chinhu chinopisa mukati memakore nekuyedza kwakawanda kwekugadzirisa, mazhinji acho akatadza kuzadzikiswa - zvakangoziviswa nguva pfupi yadarika kuti Netflix yakanga yasarudza inoenderana nenyaya yacho- Saka chichava chiitiko chakakosha kune vateveri kuti vaone izvi zvinoenderana nebasa raGaiman
Unogona kutarisa AUDIO CLIP yenyaya nyowani na KUCHADZA PANO.
Iko hakuna izwi parizvino pamusoro pekukanda kweiyo odhiyo nhepfenyuro. Chikamu chekutanga che The Sandman ichave iripo yekurodha Zhizha 2020 muChirungu nekuburitswa kunotevera muFrench, ChiGerman, Chiitaliya, neSpanish.
zvinonzwikaDC ComicsDirk MaggsMorpheusNeil GaimanThe SandmanWaylon Jordan
'Hocus Pocus 2' Inotsvaga director wayo kuDisney
Scott Derrickson Anotora Pamusoro 'Bermuda' Kuna Sam Raimi